Ny mpitoriteny Rodney Howard-Browne azo sazy an-tranomaizina noho ny heloka bevava manohitra corona lalàna | Apg29
Mety ho voaheloka hatramin'ny 60 andro an-tranomaizina sy lamandy $ 500.
Rodney Howard-Browne no voalohany fanompoam-pivavahana ao amin'ny Etazonia amin'ny mety ho fanenjehana noho ny heloka bevava Corona Act.
Violation corona lalàna
Rodney Howard-Browne no tena fantatra amin'ny anarana hoe ny mpitory izay nitondra ilay antsoina hoe mihomehy fifohazana any Soeda any amin'ny taona 1990 mety ho voaheloka hatramin'ny 60 andro tany am-ponja sady nampandoaviny sazy $ 500 noho izy Nandamina fivoriana tao amin'ny fiangonana an-jatony ny mpitsidika amin'ny roa fotoana samy hafa, na dia eo aza ny manampahefana corona fandrarana ny fanangonana maherin'ny folo olona.
Voalohany pasitera izay mety fitsarana ho an'ny heloka bevava manohitra corona Act
Rodney Howard-Browne ny Fiangonana antsoina hoe The River Tsy ny fiangonana ihany no ao amin'ny United States mba handrava ny tetik'ireo manam-pahefana amin'ny alalan'ny fandaharana maro mandray anjara amin'ny fivoriana, fa tsy ao an-trano amin'ny alalan'ny aterineto toy ny fiangonana maro hafa. Fa Rodney Howard-Browne no voalohany fanompoam-pivavahana ao amin'ny United States izay mety fitsarana ho an'ny heloka bevava corona Act .
A US tatitra dia mampiseho fa ny iray amin'ny folo Amerikana milaza fa ny fiangonana dia hanohy hankalaza Alahady tolotra toy ny mahazatra ao amin'ny fiangonana, na dia eo aza ny manampahefana fanakanana ny fanangonana maherin'ny folo olona.